အဖွူရောငျ အိမျလေးတလုံး: 2009
ညီမလေးနှင်းမာ တစ်ယောက် ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ပြန် လာတာ မျက်နှာ သ်ိပ်မကောင်းပါ ။ အဖေတို့အမေတို့ကို ကန်တော့ ရင်းလာနှုတ်ဆက် တာလို့ပြောပါသည်။ ညီမလေး ဘယ်ကို များခရီး ဆန့် အုန်းမလို့ပါလိမ့် ။ ဒီလို ကန်တော့ရင်း နှုတ်ဆက်တာ ဒီတစ်ခါ တတိယ အကြိမ် ဖြစ်သလို နောက်ဆုံး အကြိမ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မှတ်မိပါသေးသည်။ လွန်ခဲ.သော (၁၀)နှစ်ကျော်ကာလ ညီမလေး အသက် (၁၅) နှစ်ပြည့် ပြီးသည့် အချိန်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရွာတွင် အထက်တန်း ကျောင်းရှိပေမယ့် ပြိးပြည်စုံသော သင်ကြားမှု မဖြစ်နိုင်ဟု ညီမလေးက ယူဆခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်တန်း ပညာကိုမြို့ကျောင်းသို. သွားရောက်သင်ကြားချင်သည် ဟုဆိုတော့သည်။ မိန်းခလေးက ဖြစ်ပြန်၊ မြို.မှာလည်း အဆက်အခံ ကလည်း မရှိပြန်တော့ စိတ်မချလို့ တားမြစ် ကြသည် ။ တကယ် ဘ၀ကို တိုးတက်ချင်ပါသည်ဆိုသည့်မ်ိန်းခလေး ။ တားမရသည့်အဆုံးခွင့် ပြုခဲ့ ရပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ (၉) တန်းအောင်ပြီးသည် နှင့် မိဘအလုပ် ၀င်၍ စီးပွားရေးဘက် ကူးခဲ့ရ၍ ပညာရေး မှာဝေး ခဲ့ရသည်။ ထို.ကြောင့် ညီမလေး ကိုတော့ မြင့်မြင့်မားမား ပညာတက်မကြီး ဖြစ်စေချင်ခဲ့သည်။ ညီမလေးတော် ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကိုဂုဏ်ထူး တွေဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရွာကျောင်းမှာ နေခဲ့သော ညီမလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ အောင်ရုံတော့အောင် ကြပါသည်။ ထို.ကြောင့် ညီမလေး အယူအဆ မမှားပါဟု ထောက်ခံမိပေမယ့် ထုတ်တော့ မပြောမိပါ။ တကယ်လို.ညီမလေး မြို့ကျောင်း သွားမတက် ရင်ရော ထူးချွှန်စွာ အောင်ပါ့ မလားဟု ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်တော့ စဉ်းစားမိခဲ့ပါသည်။
ဒီလိုနဲ့ ညီမလေး ရွာကိုမပြန် ဖြစ်ခဲ့တော့ပါ။ ပြန်ရင်လည်း အလည်အပတ် လောက်သာ လာတက် ပါ တော့ သည်။ ဘ၀တိုးတက်ဖို. ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲက ထွက်ခွာ သွားတဲ့ ညီမလေးကို လွမ်းမိပါသည်။ ညီမလေး လိမ်မာ ပါသည် ။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ခလေးတွေ ကို (Guide ) ဟုခေါ်သော စာပြဆရာမလေး လုပ်ရင်း သင်တန်းတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု တက်သည်။ စက်မှုတက္ကသိုလ် တက်၍ အင်ဂျင်နီယာမကြီး လုပ်မည် ဟု ပြော ပါသည်။ ကျွန်တော် နားမလည်သော ဘာသာ စကား တွေပြောတက်တဲ့ ညီမလေးကို လေးလေးစားစား ချီးကျုး မိပါသည် ။
ညီမလေးကံဆိုးပါသည်။ ခေတ်ကာလအခြေအနေအရ ကျောင်းပိတ်ကာလ နှင့်ကြုံတော့ တက္ကသိုလ် မတက်ခင် (၄)နှစ်လောက် နားနေ ရပါသည် ။ ဒါပေမယ့် ညီမလေး အလကား မနေခဲ့ပါ။တဖက်က စာသင်ရင်း သင်တန်း တွေ တက်၍ တက်လမ်းရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဒေသမြို့ ကလေးမှ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ.အခြေချပါသည်။ ဤအကြိမ်သည် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် နှုတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရွာမှာ ပြန်နေပါလား ညီမလေးရယ် လို့ ဘာရယ် မဟုတ်ပြောမိတော့ ညီမလေးက ရယ်ပါသည်။ ဟုတ်တာ ပဲလေ သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ တို့ရွာမှာမှ လုပ်လို့ မရတာပဲလို့ ဖြေရင်း လွမ်းရပါသည်။ ဒီလိုနဲ. တက္ကသိုလ် ပြီးလို့ ဘွဲ.ရပြိး အင်ဂျင်နီယာမကြီး အဖြစ်အလုပ်ရပါသည် ။ ဒီအလုပ်လေးရဖို့ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အရင်းအနှီး အတွက်တော့ ညီမလေးက ညိုးငယ်စွာ တောင်းပန်ပါသည် ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ကျေနပ်ပါသည် ၊၊ ကျွန်တော့် ညီမလေး ဘ၀အခြေကျပြီ လို့ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ပီတိဖြစ်ရပါသည်။ ညီမလေးရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကို ရင်ဖွင့်ပြောပြ ပေမယ့် အသိဥာဏ် နည်းတဲ့ ဗဟုသုတ မရှိတဲ့ ကျွန်တော် နားမလည်ပါ ။ သူရတဲ့လခနဲ. မလောက်ငှ တဲ့အကြောင်း ပြောရင် ကျွန်တော်က မပူပါနဲ. ညီမလေးရယ် အစ်ကိုပို့ မှာပေါ့ လို့ ပြောတော့ ငိုရှာပါတယ် ။ ကျွန်တော့် ညီမလေး သည်းသည်း ထန်ထန် ကို ငိုပါတယ် ၊၊ ဘာကိုမကျေ နပ် လို့ ငိုမှန်း မသိပေမယ့် ညီမလေးကို ဖျောင်းဖျနား ချရပါတယ်။ ရောင့်ရဲပါလို.လည်း တရားချမိ ပါတယ်။ အခုလို ဌာန ကြီးတစ်ခုမှာ ၊ စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုမှာ တရားဝင်အလုပ် ရနေတာပဲ အစ်ကိုတို.က ဂုဏ်ယူ ၀မ်း မြောက် ပါပြီ၊ ဘာမှမလိုပါဘူး ၊ အမေတို.ဆိုရင် သူတို.သမီး ပညာတက်မကြီး အတွက် ကြွားရတာ အမောပဲ လို.ဆိုတော့ ညီမလေး ထပ်ငိုပါသည်။ ရှိုက်ကြီးတငင် ၀မ်း နည်းစွာ ငိုပါသည် ၊၊ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါ ။ ကျွန်တော့် ညီမလေးကို မငိုစေချင်ပါ ၊၊
ညီမလေးပြောတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ဘာသာ စကားတွေ ပိုပြီးမြင့် လာတာ သိပေမယ့် ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။ ညီမလေးလိုလည်း မစဉ်းစား တက်ပါ။ ပ္မစည်းတစ်ခု ကို ၁၀၀ ၀ယ်ပြီး ၁၁၀ ရောင်းရင် ၁၀ မြတ်တာတော့ သိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ညီမလေး ပြောတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ဆိုတာတော့ နားမလည်ပါ ။ ညီမျှမှုတွေ မညီမျှမှုတွေ ၊ မတရားမှုတွေ တရားမှုတွေ ဆိုတာတွေလည်း ညီမလေးပြောပြ ပေမယ့် အသိဥာဏ်နည်းတဲ့ ကျွန်တော် နားမလည်ခဲ့ရိုး အမှန်ပါ ၊၊
ဒီလိုနဲ. ညီမလေး ယခု တတိယအကြိမ် နှုတ်ဆက်ပြန်ပါသည်။ ပထမအ ကြိမ် နှုတ်ဆက် စဉ်က မိုင် ၂၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ကျွန်တော်တို.နားက မြို့ကလေး။ ဒုတိယ အကြိမ် နှုတ်ဆက်တော့ မိုင် ၂၀၀ ကျော် ဝေးတဲ့ ရန်ကုန်မြို.။ ညီမလေး ဒီတစ်ခါ နှုတ်ဆက်တာ တတိယအ ကြိမ်ပါ။ မိုင် ၂၀၀၀ နီးပါး ဝေးမယ်. နေရာတစ်ခု ဆီသို. ၊၊ ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ် အရွယ် မဟုတ်တဲ့ ၂၇-၂၈ အရွယ် ပညာတွေ အတွေ.အကြုံတွေ ပြည်.၀ နေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီမို့ အထူးတော့ စ်ိတ်မပူ မိတော့ပါ။ လူဆိုတာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ပြောင်းရွှေ.နေထိုင်ရတာ ပါပဲလေလို. ဖြေတွေး ရပါတယ်။ သမီးကို စိတ်မချတဲ့ အဖေ နဲ.အမေ ကို တရားနဲ. ဖြေဖို့ပဲ နှစ်သိမ့်ရပါတယ်။ ဘာကို စိတ်တို မှန်းမသိဘဲ တောက် ခေါက်ပြီး အံကြိတ်နေတဲ့ အဖေ့ကို လည်း ဖျောင်းဖျ ရပါတယ် ။ အဖေ့ ကိုလည်း အံကြိတ် တက်ခေါက် စိတ်သောက မစေချင်ပါ ၊၊ တစ်မြေတစ်ပါးဆီ သွားတော့မယ့် သမီးအတွက် ငိုကြွေးနေတဲ့ အမေ့ကို လည်း သနားမိပါသည် ၊၊
ကျွန်တော်ကတော. နွားခြေရာ ခွက်ထဲက ဖားသူငယ်လို.ပဲ ပြော ပြော ဘာမှမသိ တဲ့မတွက် ဘာမှ မခံစား ရတာ အမှန်ပါ။ ညီမလေးလို ပညာတွေ တက်ခဲ့ရင် ညီမလေး လို စိတ်ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရ အုန်းမှာ အမှန်ပါ။ ကျွန်တော့် ညီမလေးကို ဒီထက်ပိုပြီး မသိစေချင် မတက်စေချင် တော့ပါ။ ပိုသိ ပိုတက်ရင် ကျွန်တော်တို့ နဲ့ပိုဝေး သွားတော့ မှာ သေချာပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမလေးကို မြန်မာပြည်မှာ ပဲ နေစေချင်ပါသည် ။ ။
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ဆိုတဲ့ စကားလေး ကို သုံးမိပေမယ့် တခါတခါ ရေကြည် တစ်ပေါက် သောက်ဖို့ ခက်နေတဲ့ အခါ မြက်နုတွေ ပေါက်နေရာပေမယ့် ကိုယ်တိုင် စားသုံးဖို့ ခက်ခဲ့တဲ့အခါလည်း အခြေသင့်ရာ လွင့် ကြရတာပါပဲလေ ၊၊ ပညာတွေ တက်ပြီး မိဝေးဖဝေး သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေရရှာတဲ့ ညီမလေးတွေ ၊ သိသိကြီး နဲ့ အံကြိတ်တက်ခေါက် မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျနေရတဲ့ အဖေတွေ ၊ အလွမ်းတွေ နဲ့ အတူ ပန်းရေ ချမ်းဆီမီးတွေ ဘုရားမှာ လှူရင် သားသမီးတွေ ဘေးဘယာကင်းဖို့ ဆုတောင်းနေရတဲ့ အမေတွေ ဒီသောက တွေ ဒီ သောကတွေ အမြန်ဆုံး ပယ်ပျောက်ပါစေ ၊၊
၀န်ခံချက် ၊၊ ၊၊ ပိုစ့်အဟောင်းလေးပါ ၊၊ ရင်ထဲမှာ နင့်နင့်နဲနဲ ခံစားရသဖြင့် ပြန်လည် တင်ပြပါသည် ၊၊ ဘ၀တွေ ထာဝရ လှပပါစေ ၊၊ သူငယ်ချင်း တွေရဲ့ ဂျီတော့ ကာစတန် မက်ဆေ့မှာ အိမ်ကို လွမ်းလိုက်တာ လို့ ရေးထားတာ မြင်မိလေတိုင်း စိတ်ထဲမှာ နင့်နင့်သည်းသည်း ကို ခံစားရပါသည် ၊၊ ဝေချင်သလောက် ဝေးပါစေ ဆိုတဲ့ အမြင့်ပျံ လိုသူတွေအတွက် မထောင်းတာလှပေမယ့် အဝေးမပျံလို သူတွေ အတွက် တော့ မိဘနဲ့ ဝေးတဲ့ ဒေသဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အစာ ရေစာ တွေ ပေါများနေပါစေ ကန္တာရပါပဲ ဗျာ ၊၊
အင်္ဂလန် (၁၉၃၈) ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်
ဆရာမင်းသုဝဏ် ရေးသားခဲ့သော ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ ၊၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင် ၁၀ နှစ်တိတိ ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ ရေးသားစပ်ကုံးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရယ်လို့ ဆရာ ချစ်ဦးညို ပြောလို့ သိခဲ့ရပါတယ် ၊၊ ဆရာက ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ ရွတ်ပြတဲ့အခါ မျက်ရည်လည်း ၀ဲခဲ့မိပါတယ် ၊၊ မြန်မာပြည်ဖွားတွေဟာ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဌာနမှာပဲ ရောက်နေပေမယ့် အမိမြန်မာ ပြည်ကို လွမ်းဆွတ်နေကြဆဲပါ ၊၊ တမ်းတနေကြဆဲပါ ၊၊ အခါမသင့်လို့ အခွင့်ရယ် မသာသေးချိန်မို့ တိုင်းတစ်မြေခြားမှာ လုပ်ကိုင်စားနေရပေမယ့် သပြေညို တွေဝေနေတဲ့ ပြည်မြန်မာကို အောင်စည်ရွမ်း ဖို့ ကမ်းလင့်မျှော်နေကြဆဲပါ ၊၊
ဓါတ်ပုံ ၊၊ ၊၊ စာပေဟောပြောပွဲ အမှတ်တယ ( ၂၀ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၉ ခုနှစ် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် )
ဒီနေ့ စနေနေ့ ၊၊ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စနေနေ့ လောက် အလုပ်လုပ်ရတာ ပျင်းတာ မရှိပါဘူး ၊၊ နေ့တစ်ဝက် ဆိုပေမယ့် တစ်နေကုန်သွား တော့တာပါပဲ ၊၊ အခြားသူတွေ က တနင်္လာနေ့ကို ကြောက်တယ် ၊၊ ကျွန်တော်က တော့ စနေနေ့ကို ကြောက်တယ် ၊၊ တခါတလေများ ည နက်သန်းခေါင်ဖြစ်သွားတက်တယ် ၊၊ ထားလိုက်ပါတော့ လေ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့လည်း လုပ်အုံးပေါ့ ၊၊ ဒီလိုနဲ့ ဒီနေ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ အလုပ်လာတာပါ ၊၊ ကိုယ့်အပျော်ကိုယ်ရှာမယ်ပေါ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဖတ်နေကျ စာအုပ်လေးပိတ် ၊ မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး စဉ်းစားပြီး မှိန်းနေတုန်း ၀ူးဝါး ၀ူးဝါး အသံတွေ ကြားလို့ ဘေးဘီကို ငေးလိုက်တော့ ကုလားနှစ်ယောက် အခုမှ တွေ့တဲ့ သူတွေလို စကားတွေပြောနေလိုက်တာ ရထားတစ်စီးလုံး သူတို့ပဲ ရှိလား မှတ်ရတယ် ၊၊ တစ်တွဲလုံး ငေးနေတာလည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူး ၊၊ သူတို့ ရွာမှာ အမီနာ လင်နောက်လိုက်သွားတဲ့ အကြောင်းများ ပြောပြီး လွမ်းနေကြတာလားမသိ ၊၊
မကြာပါဘူး ၊၊ နောက်ထပ် ၀ူးဝါးဝူးဝါး အသံထပ်ထွက်လာပါတယ် ၊၊ တစ်တွဲလုံးလည်း လိုက်ရှာတာပေါ့ ဘယ်ကပါလဲပေါ့ ၊၊ ဒီနေ့ ရထားပေါ်ကလူတွေက အကြံတူနေတယ် ထင်ပ ၊၊ ကျွန်တော့်လိုပဲ စာအုပ်လေးပိတ် ထားတဲ့သူနဲ့ ၊ သတင်းစာလေး ပိတ်ထားတဲ့သူနဲ့ လိုက်ရှာကြတာ တတိယ အသံရှင်ကို ၊၊ ဟော တွေ့ပါပြီ ၊၊ ကိုယ် တော်ချောက ခုနက ကုလားနှစ်ယောက်ဘေးကနေ ဖုန်းထပြောနေတာ၊၊ အားကောင်းမောင်းသန်ကို အော်နေတာ ပြည်မက အမျိုးတွေနဲ့ အကြွေးကိစ ဆွေးနွေးနေပုံရပါတယ် ၊၊ ဟဲဟဲ ပွဲကတော့ စည်လာပါတယ် ၊၊ သူလည်း ကိုကုလားတွေကို နိုင်အောင်တော့ မပြောနိုင်ရှာပါဘူး ၊၊ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ဘာသာဘာဝ တရုတ် သီချင်းကို အကျယ်ကြီး ထဖွင့်ပါတော့တယ် ၊၊ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်လို ကုလားနှစ်ယောက်က အပြိုင်ပြော နေသလို တရုတ်ကလည်း သီချင်းသံကုန်နဲ့ တော်တော်ကို အိပ်ချင်ပြေသွားပါတယ် ၊၊
လာပါပြီနောက်တစ်မျိုး ၊၊ ရထားကနေ ကားပေါ်ရောက်တော့ မှိန်းနေတုန်း နောက်နားဆီက " အင်....... ဟင့်........... မောင်.................. အွန့် ရောက်တော့မယ်လေ ................ အာ............. ကွားးးးးးးးးး အသံကြီးကလည်း အိပ်ချင်မူးတူး ကြီးနဲ့ ............. ဘာလဲ ............့ kjlkjflfjlksfjlsfjriri vnkdslfjsdlfjdsf jfpefp သူဌေး ဆီကနေ ညနေကားတောင်းလာခဲ့နော် မောင် လို့ မနက်ဖြန် သွားစရာ ရှိတယ်လေ ကွာ......... ယယယယယယယယယယယယယယ " အိုးမိုင်ဂေါ့ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရွာကအမျိုး စာဥ ရယ်လေ ၊၊ ချွဲပြီး ပျစ်နေတာ အင်း စိတ်ကူးဖဲရိုက်ပြိး အသံကတော့ ကြံကျိတ်ဆုံက ထွက်လာသလို ဆိုတော့ ရုပ်ကို မှန်းပြီ ပေါ့ ၊၊ ဘယ်လိုလေးလဲပေါ့ ၊၊ ကြည့်ချင်စိတ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကို တစ်ယောက်တည်း ဖဲရိုက်လာတာ ၊ ဟိုဖက်က သာအေး ကိုတောင် ဘယ်လို ပုံပါ လိမ့်ပေါ့ ၊၊ နောက်ဆုံး မှတ်တိုင်ရောက်တော့ အသာလေး ခလုတ်လေးကို နှိပ် ခေါင်းလေးကို ၄၅ ဒီဂရီ စောင်းပြီး ရူုလိုက်တော့ အားပါးပါး ............... မြန်မာကားတွေ ကြည့်ကြတယ် မဟုတ်လား ဟီဟီ ဟိုမင်းသမီးလေးလေ ........... နာမည်တော့ မေ့နေတယ် ............ ဟိုတခါ မိုးဒီနဲ့တောင် ထက်လင်း ရင်လူးဆေး ကြော်ငြာ ရိုက်ဖူးတဲ့ မင်းသမီးလေးလေ ............ ဟီဟိ
ဘာရယ်မဟုတ် အလုပ်ကို ညထိ လုပ်ရအုံးမယ့် စနေနေ့ အမှတ်တယ ရုံးရောက်ရောက်ချင်း ဘာမှ မစခင် တင်လိုက်တာပါ
ဒီနိုင်ငံလေး ဒီ ကျွန်းလေးကို ရောက်တာ သိပ်ကာလ မကြာသေးပေမယ့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့ အိပ်ခန်း လေးတွေ တော်တော်များခဲ့ပြီ ၊၊ အင်း .....တော်တော်များပြီဆိုတာက ကိုယ့်စံနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေ ၊၊ ဟိုမှသည်မှ ဟိုနေရာ ကသည်နေရာ ၊၊ ကိုယ်အဆင်ပြေမယ်ထင်တာလေးတွေ ၊ အဆင်ပြေမယ်ထင်ရတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာပါပဲလေ ၊၊ အလုပ်တစ်ခုပြောင်းဖြစ်တိုင်း အလုပ်သွားရမှာ ပျင်းတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် တော့ နီစပ်ရာနေရာလေးတွေ ပြောင်းရွှေ့နေဖြစ်ခဲ့တယ် ၊၊ ဒီအကျင့်က မြန်မာပြည်က ပါလာတဲ့ အကျင့်လို့ပဲ ဆိုရမယ် ၊၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က အလုပ်တွေက အစိုးရစီမံကိန်းတွေ ဆိုတော့ မြို့မနီး ရွာမနီး ကိုယ့်အစုအဖွဲ့လေးနဲ့ကို နေထိုင်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ရွာလေးတစ်ခုလို ၊၊ အလုပ်ဆိုတာလည်း အိမ် ၊ အိမ်ဆိုတာလည်း အလုပ် ၊၊ မနက်အိမ်ယာထလို့ မျက်နှာ ကပျာကယာ သစ်ပြီးတာနဲ့ ဆိုက်ထဲရောက်နေပြီ ၊၊ ညနေလည်း အလုပ်သိမ်းတာနဲ့ အိမ်ပေါ် ရောက်နေပြီ ၊၊ ဘာအ၀တ်အစားမှ လဲစရာ မလိုသလို ၊ ဘာမှလည်း ပြန်ဆင်ဖို့ မလို ၊၊ မီးပူလည်း မလို သလို ရေမွှေးတွေလည်း မလိုတဲ့ ဘ၀ ကောင်းလိုက်တာ အော် လွမ်းလိုက် တာ ၊၊ ဒီလိုနဲ့ ဒီမှာနေဖြစ်တော့လည်း အလုပ်သွားတဲ့ အချိန်ကို တော်တော် အပျင်းကြီးခဲ့သည် ၊၊ ဒီလိုနဲ့ အလုပ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ နေရာလေးတွေ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ဖြစ်ခဲ့သည် ၊၊ အင်းအခုလည်း နောက်တစ်နေရာ ပြောင်းရ ပြန် ပြီ ၊၊ ရောက်တဲ့နေရာ ပျော်တက်တဲ့ ကျွန်တော် ၊ ပေါင်းမိတဲ့ သူကို ခင်တက်တဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ရှင် တွေကို သံယောဇဉ် ဖြစ်နေမိပြန်သည် ၊၊ ဒီလိုပါပဲလေ ကြာတော့လည်း မေ့သွားမှာပါ ၊၊ ဒီလိုနဲ့ ချီတက်လာခဲ့တာ ကြာခဲ့ ပြီပဲ ၊၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေကိုကျောခိုင်းခဲ့သလို ကိုယ်ခင်တဲ့သူတွေကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ တာလည်း များခဲ့ပြီ ၊၊ ဒီလို ပြောင်းရရွှေ့ရ နေရာသစ်ကို သွားရတဲ့ အခါတိုင်း နေရာဟောင်းကိုတော့ တသလွမ်းဆွတ်နေမိပြန်ရော လေ ၊၊ ဒါကြောင့် အသစ်အသစ်တွေကို မခင်ချင် မကြင်လိုတော့ပြီ ၊၊
ပထမဆုံး အိမ်လေးက Yishun ဆိုတဲ့ အိမ်လေး ၊၊ ဧည့်ခန်းမှာ ၁၀ ရက်လောက် အိပ်ခဲ့ရဖူးတယ် ၊၊ စိတ်လည်း ညစ်ခဲ့ရတယ် ၊၊ ပျော်လည်းပျော်ခဲ့ရပါတယ် ၊၊ နောက်တော့ တစ်နေရာပြောင်းဖြစ်ပြန်ရော ၊၊ နောက် ထပ်ပြောင်းပြန်ရော ၊၊ နောက် နောက် နောက် ၊၊ အတူနေခဲ့ဖူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း တခါတလေ ကလွဲလို့ တမင်တကာ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြ ၊၊ တခါတလေ ဖုန်းဆက်ဖြစ်တာကလွဲရင် ဆုံဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို မှ မလွယ်တော့ ၊၊
ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀မှာ မှတ်မှတ် ထင်ထင် ပါဝင် ပတ်သပ်ခဲ့ဖူးသူတွေကို တစ်နေ့နေ့မှာ တစ်နေရာရာ မှာတော့ အားလုံးနဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ ဖူးချင်သေးတယ် ၊၊ နောက်ဆုံး ဆိုတဲ့ ကာလလေးမတိုင်ခင်မှာပေါ့ ၊၊ အားလုံးကို လွမ်းနေဆဲ ပါ ၊၊ သတိယမိနေဆဲပါ ဆိုတာလည်း သူတို့ သိစေချင်မိတယ် ၊၊ အခြေအနေအရ အတူခရီးမဆက်ရပေမယ့် အတူ ရှိခဲ့တဲ့ ကာလလေးမှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကူညီဖေးမ ခဲ့ဖူးတာလေးတွေကို ကျေးဇူးတင် အမှတ်ထင် နေဆဲ ပါဆိုတာလေးလည်း ပြောပြချင်မိပါတယ် ၊၊ သူတို့လည်း အဆင်ပြေပါစေလေ ၊၊ ဆက်လက်ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့
ပထမဆုံး နေခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်ခန်းလေးပါ ၊၊
တကယ်ကို မအားမလပ်နဲ့ ဘလော့အိမ်လေးဖက် မ၀င်ဖြစ်အောင်ကို အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ် ၊၊ ဘာတွေမှန်း ကို မသိတာ ၊၊ အားခဲထားတယ် အသစ်လည်း တင်ချင်တယ် ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီလည် လည်လည် သွားချင် တယ် ၊၊ မရောက်တာလည်း ကြာပြီ ၊၊ အလုပ်ကို တော်တော် ချစ်တဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေကို တော်တော် လေးစား နေမိတယ် ၊၊ အရင်တုန်းက တခါမှ အဲဒီလို မဖြစ်ဖူးဘူး ၊၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အလုပ်မှာ အချိန်ဘယ်လို အသုံး ချရမယ် ဆိုတာ စလုံးတွေ သင်ပေးလိုက်တာ အခုစိတ်က လုပ်ချင်စိတ်ထက် ပြန်ချင်စိတ်က များနေပြီ ၊၊ မဖြစ်သေးဘူး ၊၊ ပြင်အုံးမှ ၊၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိတ်ရက်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီ လည်လည် သွားပါအုံးမယ်ဗျာ ၊၊
နောက်ကြောင်း ကိုပြန်ငဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်း မပီဝိုးတ၀ါး အရိပ်တွေက ခေတ်ဟောင်းရုပ်ရှင်ကား တစ်ခုလို ဖြူလိုက်မည်းလိုက် တခါတခါတော့ စိမ်းလိုက်ဝါလိုက် ၊၊ အော် အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တွေက ကိုယ့်နောက်မှာ ထပ်ချပ် မကွာဘူးနော် ၊၊ နေပူပူမှာ အတူလျှောက်ခဲ့ရတဲ့ ကာလလေးတွေမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကယုကယင် ဖေးမခဲ့ဖူးတဲ့ ကာလလေးတွေကို သတိရတယ် ၊၊ နေပူပူ ခရီးကြမ်းတစ်ထောက်မှာ တစ်ယောက် လက်ကို တစ်ယောက် တွဲပြီး လျှောက်လှမ်းခဲ့ဖူးတာကို လွမ်းတယ် ၊၊ ဟိုအခါ နေပူစဉ်က မင်းလှမ်းခဲ့တဲ့ ရေပူ ခွက် လည်း ဘယ်ဆီမှာလည်းကွယ် ၊၊ ခုနေခါမတော့ မင်းကမ်းမယ့် ခွက်က ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်သလို ကိုယ် ကြိုက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းလည်း မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး ၊၊ မင်းကိုလှမ်းမယ့် လက်ကလည်း ကိုယ်မှ မဟုတ်တော့တာပဲ ၊၊ မင်းသွား တဲ့လမ်း ပန်းပွင့်တွေ ခင်းထားပေမယ့် ကိုယ်လျှောက်နေရတဲ့ လမ်း ဆက်လက် အထီးကျန် နေဆဲပါလား ၊၊ ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာများ နားခိုရာကိုင်းလေးတစ်ခု ၊ သောက်သုံးစရာ ကမ်းလင့်လာမယ့် ရေအေးလေး တစ်ခွက် ရနိုင်ပါ့မလဲ ရယ်လို့ တမ်းတမ်းတတ ငံ့လင့်နေမိဆဲ ၊၊
၀ိုင်ဝိုင်းကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ တစ်နေရာမှာတော့ ရှိမယ်တဲ့လေ တကယ်များလား ကိုယ့်အတွက်တော့ အတိတ်တွေ သာမက အနာဂတ်ဆိုတာက လည်း မပီဝိုးတ၀ါး ပါလားနော်
လူဆိုတာ အားနည်းနေသမျှ ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ ကံတရား မျှော်လင့်ရင်းမောနေ တဲ့
အမှန်တကယ်ကို အဲဒီမပြည့်စုံခြင်းတွေ အတွက် မောနေရတာပါပဲ
ကမ္ဘာမြေရဲ့ တစ်နေရာမှာတော့ အားပေးမယ့်သူရှိအုံးမယ် တွေ့ချင်သေးတယ်
တကယ်ပါ ၊၊ တစ်နေ့နေ့ပေါ့ ၊၊ တွေ့ခွင့်ရရင် တွေ့ချင်ပါသေးတယ် .................
ကျောင်းကြီးကိုလွမ်းတယ် ၊၊ လွမ်းတယ် ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းတယ် ၊၊ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေကို လွမ်းတယ် ၊၊ အားလုံးကိုလွမ်းတယ်ကွာ ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေ ဘာတွေများလုပ်နေလဲ ၊၊ ကိုယ်တိုင်ရော ဘာတွေ များလုပ်နေလဲ ၊၊ လွမ်းရယ် မပြေတဲ့
အရင်တုန်းက တင်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့်လေးကို ပြန်တင်တာပါဗျာ ၊၊ ပြန်တင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ် ၊၊ မသိသေးတဲ့ သူတွေကို သိစေချင်တယ် ၊၊ သိပြီးသားသူတွေ သွားဖို့မေ့နေရင် ပြန်သတိရအောင် လမ်းညွှန်တာ ပါ ၊၊ အဲဒီလိုက်ပို့တဲ့ ဦးလေးကြီးကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်တွေ့ပါ ၊၊ တခါတခါ စိတ်ဆိုတာ ဆန်းကျယ်ပါတယ် ၊၊ သက်သေ ပြစရာ အခိုင်အမာမရှိပေမယ့် ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတွေ မို့ ဆုတောင်းဆုယူ အဓိဌာန် ကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေ မို့ ခံစားချက် ယုံကြည်ချက်တူသူချင်းမို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါသည် ၊၊ ကာယကံရှင်တွေ ဘယ်လိုခံစားရတယ် မသိပေမယ့် ကိုယ်လိုက်ပို့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်သူတွေ တော့ အဆင်ပြေသွားကြတာ တွေ့ရ ပါတယ် ၊၊ တကယ်ပါ ၊၊ ကျွန်တော်တော့ အားလပ်လို့ အချိန်ရတဲ့ အခါတိုင်း သွားရောက် ဒါနပြု ပူဇော်ပါတယ် ၊၊ ကိုယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့လည်း နီး လမ်းလည်းသင့်တာမို့ တခါတစ်ခေါက်ဖြစ်ဖြစ် သွားဖြစ်အောင် သွားလိုက် စေချင်ပါတယ်ဗျာ ၊၊ ယုံယုံကြည်ကြည်လေး လှူဒါန်းပူဇော်ပါ ၊၊
ကျုပ် စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ ၊၊ တကယ်ပါ ၊၊ ကိုယ့်နဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး လက်ထပ် ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပွား ကိုယ့်မယားကို စိတ်ပျက်ရတာ လောက် စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတာ ရှိမယ် မထင်တော့ ပါဘူးဗျာ ၊၊ သူတကာ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်း ရင်ဖွင့်လို့ မရတဲ့ အဖြစ်ပါဗျာ ၊၊ ကိုယ် ရင်ဖွင့်တဲ့ သူကရော ဘယ်လို ပြန်ပြီး အကြံပေးရပါ့မလဲ ၊၊ ကိုယ်တိုင်ရော ဘယ်လို မျက်နှာမျိုးနဲ့ သူတကာ ကို ပြောပြလို့ ရပါမလဲဗျာ ၊၊ အဲဒီလိုဆိုရင်လေ ကျုပ်အမေ တောသူမကြီးကို သိပ်သတိရတာပဲ ၊၊ ကျုပ်အမေ ပညာမတက် ဘူးဗျ ၊၊ ဒါပေမယ့် သာသမီး တစ်ကျိပ်လောက်ကို ဒီဘ၀ရောက်လာအောင် ဘယ်လို သွန်သင်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကျုပ်လေ သိပ်ပြချင်တာပဲ ၊၊
ကျုပ်မိန်းမဗျာ ပညာတက်ပါပဲ ၊၊ ဧည့်ခန်းမှာ ဓါတ်ပုံ ချိတ်ထားလေရဲ့ ၊၊ သူမွေးထားတာ ၃ ယောက်တည်း ၊၊ သမီး ၂ ယောက် သား ၁ ယောက် ၊၊ အလုပ်ဆိုတာ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုဘူး ၊၊ ပိုက်ဆံဆုိုတာ သူ့ကဒ် ထဲကို လကုန်ရင် ၀င်ပြီးသား ၊၊ သူလိုရာသုံး ၊၊ သူလုပ်ချင်ရာလုပ် ၊၊ သူ့အဓိက တာဝန်က သားသမီး တွေ တာဝန်နဲ့ အိမ်ထောင် တာဝန်လေးပဲ ၊၊ ဒါတောင်မှ ကျုပ်က ရုံးပိတ်ရင် မီးပူတိုက်တာ ဈေးဝယ်ထွက်တာ လုပ်ပေးလိုက် သေးတာ ၊၊ ကျုပ် မတရားမပြောချင်ပါဘူးဗျာ ၊၊ ဒါပေမယ့် ကျုပ်အမေက စီးပွားလည်း ရှာ ရသေးတယ် ၊၊ အဖေက ၀န်ထမ်း ၊၊ သာသမီးက တစ်ကျိပ် ၊၊ အားလုံး ပညာတွေလည်း ကုန်အောင် အမေ့ စကားပြော ရရင်တော့ အတန်းကုန်အောင် သင်ပေးနိုင်တယ် ၊၊ အာလုံးလည်း လူလွန်မသားတွေ မဖြစ်ပါ ဘူးဗျာ ၊၊ တကယ်ပါ ၊၊
ခုတော့ဗျာ ၊၊ ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းတာ ဖြစ်အုံးမယ် ၊၊ ကျုပ်သမီး ၁၃ နှစ်သမီး ရည်းစားထားတယ် တယ်ဗျာ ၊၊ သူအမေ တစ်ယောက်လုံး ရှိနေတာဗျာ ၊၊ ဘာအလုပ်မှလည်း မလုပ်၇ဘူး ၊၊ ကျုပ် သေချင်တယ် ၊၊ တကယ်ပါ ၊၊ ကျုပ် နားလည်ပါတယ်ဗျာ ၊၊ ကျုပ်လည်း ပညာတက် ခေတ်လူ တစ်ယောက်ပါ ၊၊ ဒါပေမယ့်ဗျာ ၊ ၁၃ နှစ် သမီး ရည်းစားထားတာတော့ ဆိုးတယ်ဗျာ ၊၊ ကျန်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်တာ ကြားပါတယ် ၊၊ ဒါပေမယ့်ဗျာ ကျုပ်သမီး ဖြစ်နေတာကို ကျုပ်တကယ် ရှက်မိတယ် ၊၊ သူအဘွား ကျုပ်အမေ သိရင် ကျုပ်ကို ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ ၊၊ တွေးကြည့်စမ်းပါ ၊၊ ဒီမိန်းမ ဗျာ ၊၊
ပြောလိုက်ရင်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြား မှာ သားသမီးတွေ က ဖြစ်နေလို့ ဆိုတာမျိုး ၊၊ ဒီမှာ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ ဆိုလို့ မရဘူးဆိုတာမျိုး ၊၊ အပိုတွေပါဗျာ ၊၊ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြင်းတဲ့ သားသမီး မဟုတ်တဲ့ အတွက် လေးစားမှု မရှိဘူး ဆိုတာမျိုး ၊၊ နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုတာမျိုး ၊၊ ကျုပ် ရယ်ချင်တယ် ၊၊ ဒါဆို လီရှောင်လုံး က ဂေးလန်းမှာ ဟိုဟာ ထောင်စားနေရမယ့် ပုံမျိုး ၊၊ ဒီကလူတွေ အားလုံး လူကြီးတွေ ဘ၀ပျက်နေပုံမျိုး ၊၊ သားသမီးတွေက လှည့်မကြည့်ပဲ လူအိုရုံတွေ ပို့ထားပုံမျိုး ၊၊ ကျုပ်တို့ ရွာပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဗျာ ၊၊ ပေါလို့ ပါ ၊၊ လူပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် ၊၊ ဘယ်မှာနေနေပါ ၊၊ သူတို့ ဆိုသလိုဆို နိုင်ငံခြားဆိုတာ အရိုင်းအစိုင်း လူမယဉ်ကျေးတွေ ရဲ့ ဌာနေပေါ့ ၊၊ အားလုံးလူကောင်းကို မရှိတော့ဘူးပေါ့ ၊၊ ဒီနေရာမှာ မွေးသူတိုင်း အရိုင်းအစိုင်းတွေပေါ့ ၊၊
ကျုပ်လည်း အလုပ်ထဲမှာ မေးကြည့်ပါတယ် ၊၊ သူတို့ မိသားစု အုပ်ချုပ်ပုံတွေ ၊၊ အသက် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ မိဘအရိပ် မလွတ်သူတွေ ၊၊ မိဘမသိပဲ ဘာမှ မလုပ်၇ဲသူတွေ တပုံဗျ ၊၊ ရည်းစား မထားဘူး တဲ့ သူတွေလည်း တစ်ပုံတပင်ဗျ ၊၊ အဲ လူအတန်းအစားတော့ ကွာသပေါ့ဗျာ ၊၊ ကျုပ်မိန်းမ လို အမေမျိုးက မွေးလာတဲ့ သားသမီးတွေကတော့ ကျုပ်သားသမီးတွေ လို ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ၊၊ ဒါတော့ ကွာတာပေါ့ဗျာ ၊၊ ဒီတစ်ခါတော့ ကျုပ်လည်း တော်တော် စိတ်ပျက်သွားမိတယ် ၊၊ ပြောလိုက်တယ်ဗျာ ၊၊ နင်လည်း ဒီလောက်တောင် အုပ်ချုပ်လို့ မရတာ ၊ ပျော်လည်းမပျော်တဲ့ ဌာနေ နေမနေနဲ့တော့ ၊၊ အာလုံး ပြန်သာပြန်တော့လို့ ၊၊ ငါဒီကနေ ငွေပို့ပေးမယ် လို့ ပဲ ပြောလိုက်တော့တယ် ၊၊ ဟုတ်တယ်လေဗျာ၊၊ သူပြောသလို ရွာမှာ ကြီးပြင်းရင် လူတော် လူကောင်း လေးတွေ ဖြစ်မှာကိုး ၊၊ ကြီးရင် သားသမီးတွေ ပြန်မကြည့်မှာ ကြောက်သတဲ့ လေ ၊၊ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အဖေအိုအမေအုို ပစ်ပြီး ကျုပ်နောက် လိုက်လာတာ ၊၊ ကိုယ့်အလှည့်မှ ပစ်ထားမှာ ကြောက်နေသတဲ့လေ ၊၊ အဲတော့ ထူးဘူး ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့တယ် ၊၊
သားသမီး ၃ ယောက်သား ပြန်လို့လည်း ပြောရော ၊၊ ငိုလိုက်ကြတာဗျာ ၊၊ ကျုပ်ဘာမှ တောင် မပြောရသေး ဘူး ၊၊ အကြီးမက ရည်းစားကိုလည်း ဖြတ်ပါမယ်တဲ့ ၊၊ မြန်မာပြည်တော့ မပြန်ပါရစေ နဲ့ တဲ့ လေ ၊၊ သမီးကြီးက ၁၃ နှစ် ၊ အငယ်မက ၁၀ နှစ် သားအငယ်ကတော့ ၇ နှစ်ပါဗျာ ၊၊ ပြီးရော ၊၊ နောက် တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ပြန်ပို့မယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ၊၊ မှတ်ကရောဗျာ ၊၊
၀န်ခံချက် ၊၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောပြတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးအား ခံစား ရေးဖွဲ့ပါသည် ၊၊
ကိုဖိုးချို ကြိး နိုင်ငံခြား သွားတော့မည် ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားရတော့ အံ့သြမိတာ အမှန်ပါ။ ယုံလည်း မယုံနိုင်ပါ ။ မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို.မှာ ၂၄-နာရီ မီးလာပြီ ဆိုတဲ့ စကားလို ဒီသတင်း စကားက ကျွန်တော်တို.ကြားမှာ ထူးခြားနေတာတော့ အမှန်ပါ ။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း မှာ ကိုဖိုးချို လောက်မြန်မာပြည် ကိုချစ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး ။ ကျောင်းကြီးပြီးသွားလို့ အားလုံး နိုင်ငံခြားသွား ကြတော့လည်း တုတ်တုတ် မျှမလှုပ်တဲ့ ကိုဖိုးချိုပါ ။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်နိုင်ငံ သွားဖို့ လုပ်လုပ် ၊ ဘယ်သူတွေ ကတော့ ဘယ်နိုင် ငံ သွားပါပြီ ပဲ ပြောပြော ၊ ဘယ်လောက်တွေ ရနေပါတယ် ဆိုဆို တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်တဲ့ ကိုဖိုးချို ရယ်ပါ ၊၊ သွားတဲ့သူတွေ ကိုတောင် မသွားဖို.တရားပြ နားချခဲ့လို. ကွယ်ရာမှာ ကိုဖိုးချိုကို ကိုမြန်မာချစ် ရယ် လို. နာမည် ပြောင်ခေါ်ခဲ့ ကြတာပါ ။ မြန်မာပြည်မှာ ငါ့တို့ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ကွ ဆိုတဲ့ ကိုဖိုးချို ၊၊
ကျောင်းပြီး ကတည်းက ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနက တံတား စီမံကိန်း တစ်ခု ကိုနေ.စားဝန်ထမ်း အဖြစ် ၀င် သွားခဲ့တာပါ။ အဆင်ပြေတာ မပြေတာထက် အလုပ်လုပ် နေရရင်ပျော် နေတက်တဲ့ ကိုဖိုးချို ပါ။ ပိုက်ဆံမရလို. လည်း တ၀မ်းတခါး မလိုပါဘူးကွာ ဆိုပြီး နေခဲ့တဲ့ ကိုဖိုးချို ပါ ။ တကယ်ကိုမြန်မာပြည် ကိုချစ်တဲ့သူ ။ မြန်မာပြည်မှာ ပျော်တဲ.သူ ၊၊ မြန်မာအချင်းချင်း မြန်မာလိုပြောရတာ ဘယ်လောက်များ အားရ စရာကောင်းလဲ မြန်မာ လိုခိုင်းလို. ရတယ် မြန်မာလိုဆဲလို. ရတယ်ကွာ ရယ်လို့ သူ.ကိုသူ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် အမြဲတမ်း ဂုဏ်ယူ တက်သူပါ။ သူကတော့ နေနိုင်တာပေါ့ မိဘကိုလည်း ပြန်ပေးစရာမလို သူ.အိမ်ကတောင် ထောက်ပံ့ နေသေးတာပဲ လို.ကွယ်ရာမှာ အတင်းဆိုလည်း သူကတော့ ပြုံးပြုံးလေး ပါပဲ။
မြန်မာပြည်မှာပဲ ရရာ အလုပ်ကို လုပ်ကြဖို.၊ မဖွံ.ဖြိုး မတိုးတက်သေး တဲ့နေရာတွေကို သွားရောက်လုပ်ကိုင် ပေးဖို. အမြဲ မဲဆွယ်နေတက် သူပါ ။ ရန်ကုန်မှာ ကားကျပ်တယ် ကွာ လို့ ညည်းရင် မင်းတို့ကွာ စစ်ကိုင်းတိုင်း အနောက်မြောက်ပိုင်းက ကလေး အထက် ချင်းတွင်းဖက် မရောက်ဖူးဘူးနော် ငါပြောပြမယ် သူငယ်ချင်း ဆိုပြီး သကာလ သူမြင်တွေ့  ခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံတွေ ရဲ့ သွားရေးလားရေး အကြောင်းတွေ ၊၊ မီးမလာဖူးကွာ အမြဲပျက်နေတာပဲ ဆိုတိုင်းလည်း မင်းတို့ကွာ ပဲခူးဟိုဖက် မုပလင်ဘက် ထွက် ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ၊၊ လျှပ်စစ်ကြီုး ကြီးတွေ အောက် မှာ နေပြီးလျှပ်စစ်မီးဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာ ဆိုတာမျိုးက စတက်တဲ့သူ ၊၊ ရန်ကုန်မှာ ခြင်တွေ ပေါတယ်ကွာ ၊ အမှိုက် တွေ လည်း မသိမ်းကျဘူးဆိုတိုင်း သူရောက်ဖူး ၊ တွေဖူးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် တနံတလျားက မြန်မာပြည်ဖွား ညီအစ်ကိုတော်များ ရဲ့ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ သုခ ဒုက အဖုံဖုံကို သူ့သွေးသားရင်း တွေ လို ပြောပြနေတက်တဲ့သူ ၊၊
တကယ်ပါပဲ အလုပ် လျှောက်ကြတော့ လည်း ကျန်တဲ့သူတွေက နီးစပ်ရာ နေရာ ပြန်တောင်း ကြပေမယ့် ကိုဖိုးချိူ ကတော့ ပထမ ဦးစားပေး ၊ ဒုတိယ ဦးစားပေး ၊ တတိယ ဦးစားပေး အားလုံး စေလိုရာစေ ဆိုတဲ.သူ၊၊ ဝေးစမ်းပါစေကွာ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ပါ ဆိုတဲ.သူ၊။ ပထမအလုပ်က ကလေးဝဆိုတဲ. စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟိုးအဖျားနား ၊၊ နောက် မွန်ပြည်နယ်ထဲက တံတား တစ်စင်းမှာ ၊၊ နောက် ချင်းပြည်နယ် ဟိုးအစွန်က ဟုမ္မလင်း ၊ ခန္တီး ၊၊ ဟိုးဘက် က လူသူ အရောက်နည်းတဲ့ နန်.စလိန်ဆိုတဲ. နာဂတွေ ရဲ.ဒေသ တွေ ၊၊ ၀န်ထမ်းတွေ ပြောနေ ကြ ဖြစ်တဲ့ သွားရော့ လဟယ် ဆိုတဲ့ နာဂတွေ ရဲ့ အစွန်အဖျား ဒေသ အခု နောက်ဆုံး မုံရွာ ဆိုတဲ.နေရာ က အိမ်နဲ. အနီးဆုံး ၊၊ ဒါတောင် သူအိမ်နဲ. မိုင် ၆၀၀ ကျော် ၊၊ ဒါပေသည့် အလုပ်လုပ်ရင်း ပျော်နေတဲ.သူ ၊၊ တကိုယ်ရေ တကာယ သွားလာနေရတာကိုက သူ့အတွက် ဗဟုသုတတွေ ရသတဲ့လေ ၊၊ ကိုယ်နဲ့ တစ်နိုင်ငံတွင်း မှာ မွေးဖွားလာတဲ့ သူ ချင်း ၊ သူတို့တွေရဲ့ နေ့စဉ် ဘ၀တွေ ကို စိတ်ဝင်စားသတဲ့ ၊၊ သူတို့ ရုန်းကန် လှူပ်ရှား နေတာတွေ မြင်ရတဲ့ အခါ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကျေနပ်မိပါသတဲ့ သူတို့ ဘ၀ တွေ ကို မြှင့်တင်ပေးလို ပါ သတဲ့လေ ၊၊
ဒါပေမယ့် အခုနိုင်ငံခြား သွားတော့ မယ်တဲ့ ၊၊ တကယ်များလား ၊၊ မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်လေ ၊၊ သူလိုလူတစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားသွားမယ် ဆိုတော့က ၊၊ ကောလဟာလ များလား၊၊ သေချာအောင် တွေ.ပြီး မေးချင် သည်၊၊ သူအိမ်ကို ဖုန်းဆက်တော. မုံရွာမှာတဲ. ၊၊ မုံရွာရုံးကို ဆက်တော. နေပြည်တော် ကို ACE နှင်. လေးလပတ် ပါသွားပါတယ်တဲ.၊၊ လူကြီးအချစ်တော် လက်စွဲ၊ လူကြီးသွားရာ ပါနေတဲ့သူ တစ်ယောက် နိင်ငံခြား သွားမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ လို့ ဘာသာ တွေးမိသည်၊၊ ရန်ကုန် ၃၈ လမ်းက ကိုဖိုးချို ရဲ. အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်တော့ ကိုဖိုးချို တစ်ယောက် မကြာခင် ရန်ကုန် ဆင်းလာမည်တဲ. ၊၊ လာခဲ.ပါလား ဆုံရတာပေါ.တဲ. ၊၊ မေးကြည့် တော့ ထိုသူငယ်ချင်းက ရယ်နေသည်၊၊ '' I dont want to say anything " တဲ. ၊၊ ဒါဆို............
နှင်းမြူတွေစဝေနေပြီ ဖြစ်တဲ. နိုဝင်ဘာလရဲ. ညတညမှာ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေသေးတဲ. လက်ကျန် သူငယ်ချင်း လေး အနည်းစု ဆုံဖြစ်ကြသည်၊၊ ဘီယာလေးသောက် ရင်းရင်တွင်းခံစား ချက်လေးတွေ ဖလှယ်ရင်း ပေါ.၊၊ အဲသည်ည က ကျွန်တော်တို. နောက်ဆုံး ဆုံဖြစ်ခဲ. ကြတာပေါ.၊၊ အမြဲတမ်း တက်ကြွပြီး စကားတွေ ဖောင်နေတက်တဲ. ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်း ၊၊ အသံတွေ ဆွံအ တိတ်ဆိတ်လို.၊၊ တခွန်းမေး မှတခွန်းဖြေသည်၊၊ ဘီယာသေက်ရင်း ဝေနေတဲ. မျက်ဝန်းတွေ ၊၊ ဘီယာကြောင်.လား၊၊ မီးရောင် ကြောင်.ဖျတ်ခနဲ လက်သွားတဲ. မျက်ဝန်းအစုံ က ဝေ.သီနေတာ ဘာတွေများဘာလိမ်. ၊၊ အရင်လို တက်ကြွနေတဲ. မျက်ဝန်းအစုံ မဟုတ်တာ တော့ သေချာသည် ။ နာကျင်နေတာလား ၊ ကြေကွဲနေတာလား ၊ နာသာခံခက် အနေရကျပ်နေတာများလား ကိုဖိုးချိုရယ် ၊၊
လူစုခွဲပြီး အိမ်ပြန်ကာ နီးတော. ကျွန်တော် သိချင်နေတဲ. မေးခွန်းလေးကို ကိုဖိုးချိုကိုအားနာနာ နဲ.ပဲ မေးလိုက်မိသည် ၊၊ ကျွန်တော်. မျက်နှာကို ကြည်.ပြီး လက်ကလေးနှစ် ဖက်နောက်ပစ်လို. ပြောပြနေတဲ. ကိုဖိုးချို စကားတွေက... "ဘ၀မှာ လူတိုင်းကတော. ကိုယ်ရဲ.ရည်မှန်းချက်တွေ ၊ မျှော်လင်.ချက်တွေ ၊ အိပ်မက်တွေကို ပုံဖေါ်ချင် ကြတာပေါ.ဗျာ ၊၊ အဲဒီထဲ မှာမှ ကံကောင်းတဲ.လူ အနည်းစုက သူတို.ရဲ. အိပ်မက်တွေကို ပုံဖေါ်ခွင်. ရကြတယ်၊၊ တချို.ကတော. အိပ်မက်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲ မေ.ထားလိုက် ကြတယ်၊၊ လူတချို.က အိပ်မက်တွေ ကို ပုံဖေါ်ဖို. ကြိုးစားရင်း ရုန်းကန်နေဆဲပဲ ............... တစ်နေ.တော. ကျွန်တော် အိပ်မက်တွေ ................ " လို.ပြောရင်း ဆူးလေလမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ခေါင်းငုံ.လမ်းလျှောက် ပြန်သွားတဲ.ကိုဖိုးချိုရဲ. ကျောကိုကြည်. ရင်း တောက်ပတဲ. မျှော်လင်.ချက်တွေနဲ. တက်ကြွခဲ.တဲ. လူငယ်တစ်ယောက် အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ပါစေလို.သာ ဆုတောင်း ပေးရင်း............................
ကိုဖိုးချိုတွေ မြန်မာပြည် မှာ ရှည်ရှည်ကြာကြာ ရပ်တည်နိုင်ပါစေ လို့သာ ဆုတောင်းမိပါတယ် ၊၊ နိုဝင်ဘာလရဲ့ အေးမြတဲ့ ဆောင်းတွင်းကာလေး တစ်ခုမှာ မြန်မာပြည်ကို လက်ပြထွက်ခွာလာတဲ့ ကိုဖိုးချိုတစ်ယောက် ရဲ့ အမှတ်တရ လေးအဖြစ် ပြန်လည် ဆန်းသစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည် ၊၊ ၁၁ ရက် ၁၁ လ ဆိုရင် ကိုဖိုးချို တစ်ယောက် မြန်မာ ပြည်နဲ့ ခွဲခွာခဲ့တာ နှစ်တစ်ပတ် လည်ပြန်ပြီပေါ့လေ ၊၊ ကိုဖိုးချို ဘာလို့ ထွက်လာခဲ့လည်း ဆိုတဲ့ အဖြေကိုတော့ ကာယကံရှင် ကိုဖိုးချိုသာလျှင် အသိဆုံးဖြစ်ပေလိမ့်မည် ၊၊ မညီမျှတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ များလာတဲ့အခါ ၊ ဘက်လိုက်တက်တဲ့ ဒိုင်လူကြီးနဲ့ လက်ဝှေ့ထိုးရတဲ့ ပွဲမျိုးမှာ ကိုယ်ဘ၀ပျက်မသွား ဖို့ အားကစား စိတ်ဓါတ် မရှိဘူးပဲ ဆိုဆို ခဏထွက်နေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ၊၊ ကိုဖိုးချိုတွေကို မထောက်ခံပေမယ့် လုပ်သင့်တာ လုပ်တယ် လို့ ပဲ ဖြေတွေး ရပါတယ် ၊၊ ကိုယ့်လက်ရည် ကျမသွား ဖို့ကတော့ ပွဲစဉ်ကြီးတွေ မထိုးပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတော့ မပျက်စေနဲ့ပေါ့ ၊၊ တိုးတက်တဲ့ အမြင်နဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ရှာဖွေပြီး ရနိုင်သလောက် စုဆောင်းရမှာကတော့ ကိုဖိုးချိုတွေ ရဲ့ တာဝန်ပါ ၊၊ ခုလောလောဆယ် အစွန့်ပစ်ခံနေရပေမယ့် တချိန်ကျတဲ့ အခါ ကိုဖိုးချို တွေ ကအသုံးကျလာမှာပါ ၊၊ ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ အမိမြန်မာပြည် အတွက် ကိုဖိုးချိုတွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ် ၊၊ အဲဒီလို ကိုဖိုးချိုတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး ရှင်သန်နိုင်ပါစေ ၊၊ အခုမဟုတ်ရင်တောင် နောင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေါ့
ကျွန်တော် ဒီနေ့ညလေး ကို တကယ်ဝမ်းသာမိတယ် ၊၊ ကျွန်တော် ဒီလို ၀မ်းမသာရတာ ကြာပါပြီ ၊၊ တကယ်ကြာခဲ့ပြီ ၊၊ ဒီခံစားချက်လေးကို ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလတုန်းက ပိုစ့်လေးတစ်ခုအဖြစ် တင်ခဲ့ဖူးတယ် ၊၊ နေရာလေးတစ်ခု ဆိုပြီးတော့လေ ၊၊ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်နေတယ်ထင်လို့ ၀ိုင်းဝန်း အားပေးသွားတဲ့ ငှက်ကလေး တစ်ဖြစ်လဲ ၀က်ကလေးရယ် ၊ သူငယ်ချင်း ယုယ ရယ် ၊ နောက် ခင်ရတဲ့ မေ ရယ် ၊ ကျွန်တော့်ကို ညီမင်းအိမ် လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုကြီးမိုးကုတ် ရယ် ၊ အခုအွန်လိုင်းမှာ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုနေဒေး ရယ် ပေါ့ ၊၊ သူတို့ ပို့ပေးတဲ့ မေတ္တာတွေ ကြောင့် အဲဒီ နေရာလေးကို သွားခွင့် ရတော့မယ်၊၊ လိုအပ်တဲ့ ညှိုနှိုင်းမှုတွေပြည့်စုံရင် ၊ ကိုယ့်ဖက်က လက်ခံပြီးရင် ၊ အားလုံး ပြည့်စုံပြီးရင် ကျွန်တော် သွားခွင့်ရတော့မယ်တဲ့လေ ၊၊ သူတို့ဖက်က လက်ခံလိုက်ပြီတဲ့ ၊၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်၊၊ လိုအပ်တာတွေ ကိုရှာဖွေ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်း ယပက်လက် ရယ် ၊ ဆရာတိုးရယ် ရောပေါ့ ၊၊ ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်သလို အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ ၊၊
( သူငယ်ချင်းတွေ ကို အမြဲတမ်း မပျော်ရွှင်တာတွေ ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ မျှဝေနေကျမို့ ဒီတခါတော့ ရှားရှားပါးပါး ၀မ်းသာစရာလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် )
(အဲဒီနေရာလေးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စည်းတစ်ခုလားလို့ အမြဲ ခံစားနေရဖူးတယ် )
ဟိုးတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊၊ မှတ်မှတ်ရရ ဘာပြောလည်း ဆို တော့ ဘာမှ မသိတဲ့ဘ၀လေးတစ်ခုကို လိုချင်လိုက်တာတဲ့ ၊၊ တကယ်ကိုထူးထွေသည့် အံရာသော် ဆိုတာမျိုးလို ပေါ့ ၊၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်တယ် တဲ့လေ၊၊ ဘာတွေများလိုအပ်နေပါလိမ့် ၊၊
ပညာရေးလည်း ဆုံခန်းတိုင်ခဲ့ပြီ ၊၊ တစ်ဘွဲ့တောင်မဟုတ် ၊၊ နှစ်ဘွဲ့ ရှိနေပြီ ၊၊ အလုပ် ရော အဆင်ပြေပါတယ် ဆိုတာ ထက် လွန်ပေါ့ ၊၊ သာမာန်လခစားဝန်ထမ်း ထက်ပိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ လူတစ်ယောက် ၊၊ အပြင် ပန်းကြည့်ရင် သူ့ဘ၀လောက် နေပျော်တာ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိပါ့မလားဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး ၊၊ လူတွေ များ တော်တော် ဆိုးတယ် နော် ၊၊ ရတာတွေ မလိုသလို လိုတာတွေလည်း မရကြပါတကား ၊၊ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ၊၊ လူမှန်ရင် ဦးတည်ချက် လိုအပ်ချက်လေး တစ်ခုတစ်လေတော့ ရှိနေမှ သာယာ စိုပြေတာပါ ၊၊
ချစ်ခဲ့ဖူးပြီ ၊ ချစ်သူတွေလည်းထားခဲ့ဖူးပြီ ၊၊ အခုအသက်အရွယ်မှာ သူ့အတွက် ဖူးနုငယ်တဲ့ အချစ်ဖူးလေးတွေ ဘယ်မှာ ရှာတွေ့ပါတော့မလဲ ၊၊ ကြာခဲ့ပြီကော ၊၊ သူမက်မက်စက်စက် လိုချင်နေတာက နှိုင်းယှဉ်မှုမရှိတဲ့ ချစ်ခြင်း တွေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်ပြီး လက်ထပ် လိုက်ချင်တယ်တဲ့ ၊၊ ဒါပေမယ့် သူအဲဒီကာလကို လွန်ခဲ့ပြီကောတဲ့ ၊၊ အင်း ကျွန်တော် ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပေးနိုင်ပါ၏ ၊၊ အခြားသူတွေကော ၊၊ ရည်းစား တွေ အများကြီး မရှိဘဲ ဒီတစ်ယောက်ကို ချစ် ၊ ဒီတစ်ယောက်လက်ထပ် ၊ ဒီတစ်ယောက်ကို တစ်သက်လုံး ချစ်သွား တာမျိုးကို အရင်က ရိုးရှင်းပြီးပျင်းစရာလို့ မြင်မိပေမယ့် ခုများတော့ အဲဒီလို အချစ်တွေ အများကြီးမသိတဲ့ ဘ၀ လေးတစ်ခုကို မက်မက် စက်စက် လိုချင်မိနေတယ် ကွာ တဲ့လေ ၊၊ အင်း ကျွန်တော်ကတော့ ခံစားပေးရင်း နှစ်သိမ့် ခဲ့ပါတယ် ၊၊ တစ်နေ့နေ့တော့ ဖြစ်ရ်ျလာလိမ့်မည် လို့ ၊၊ သို့သော် ..................
ဒီလမ်းကို လျှောက်ဖူးသူမို့ သူ့အတိတ်ဟောင်းကို မေ့နိုင်ပါမည်လော ................
မေ့နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ခံစားချက်တွေ လက်ဆက်နေပါအုံမလား ........................
အလွမ်းရှည်ရှည် ကျောင်းရက်တွေကို သတိရစေပြန်သလားကွယ် ၊၊ ဟိုးတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖုံးဆက်လာတယ် ၊၊ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြရအောင်တဲ့ ၊၊ သူတို့ စီစဉ်နေပါတယ် တဲ့ ၊၊ အော် အင်း တွေ့လေဆိုတော့ စာရင်းမှတ်လိုက်ပြီနော်တဲ့ ၊၊ တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာတင်ဆိုတော့ ဘာမှလဲ မပြောအားပဲ အင်းအင်း လို့ပဲ ခပ်လွယ်လွယ် သေချာလိုက်မိတယ်၊၊ တွေ့လည်းတွေ့ချင်မိပါတယ် ၊၊ သူငယ်ချင်း တွေ အားလုံးကိုပေါ့ ၊၊ မတွေ့လည်း မတွေ့ချင်ပါဘူး ၊၊ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ့ ၊၊
အော် ဘာလိုလိုနဲ့ ပြန်တွေးမိတော့ နှစ်တွေတောင် အတော်ကြာပါပေါ့လား ၊၊ ကျောင်းမြေကနေ နောက်ဆုံး ထွက်ခွာ လာခဲ့တာ ၊၊ မှတ်မှတ်ယယ အခုလို အောက်တိုဘာ ၊ နိုဝင်ဘာပေါ့ ၊၊ စာမေးပွဲတွေ ပြီးတော့ နိုဝင်ဘာ မှာ ထင်ပါရဲ့ ၊၊ ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေကို လွမ်းလိုက်တာ ၊၊ လက်ခုပ်ပင်ထီးထီးကြီးကို လွမ်းလိုက်တာ ၊၊ ပြီးတော့ စွယ်တော်ပင်လေးတွေကို လွမ်းလိုက်တာ ၊၊ ကျောင်းကင်တင်းလေးကို လွမ်းလိုက်တာ ၊၊ အရာအားလုံး ဟာ လွမ်းစရာတွေ ပါလား ၊၊ အင်း နောက် လွမ်းနေတာလေးလည်း ရှိပါသေးရဲ့ ၊၊ ခုချိန်ထိလွမ်းလို့ကောင်းနေ ဆဲ ကိုယ်မှာ လွမ်းစရာ ဒါလေးပဲ ရှိတာကိုး P: ၊၊
ဘယ်သူတွေ ၀လာပြီလဲ၊၊ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ များဖြစ်နေကြပြီလဲ ၊၊ ဘယ်လိုတွေများဘ၀ကို ကျော်ဖြတ်နေ ကြပြီလဲ ၊၊ ကျောင်းတုန်းက ခပ်ပိန်ပိန်ကောင်မလေးလည်း လူသေးသေးလေးနဲ့ ဖြစ်နေပြီလား ၊၊ အင်း ဘာတွေ များပြောင်းလဲနေကြပြီလဲ ၊၊ သိချင်မိပါရဲ့ ၊၊ ဒါပေမယ့် လူတွေကြည့်မယ့် အပြစ်မကင်းတဲ့ အကြည့်တွေကိုလည်း ရင်မဆိုင်လိုသေး ၊၊ ရင်မဆိုင်ချင်သေး ၊၊ တက်နိုင်ဘူးရယ် ၊၊ လာမယ်လို့ပြောပြီးမှတော့ သွားရတော့မှပဲ ၊၊ အနည်း ဆုံး လူတွေ မမြင်ထဲ ရင်ထဲက အနာကို ပလစတာလေးအုပ်ပြီး ပြုံးပြုံးလေး လုပ်နေရအုံးမှာပေါ့လေ ၊၊ ကြာလှ ၄ နာရီပေါ့ ၊၊ အင်းဒီတစ်ခါတော့ ဆြုံဖစ်ကြပြီပေါ့ ၊၊
ဘယ်သူတွေ အိမ်ထောင်တွေ ကျနေပြီလဲ ၊၊ ဘယ်သူတွေ တစ်ယောက်တည်း ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေလဲ ၊၊ အင်း ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက ထင်ခဲ့ဘူးတဲ့ အသက်ခပ်ကြီးကြီး လူပျိုကြီး တွေ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပါရောလား ၊၊ ဘု ရားဘုရား ၊၊ မထင်မှတ်ထားတာတွေ ဖြစ်နေပါရောလား ၊၊ အဲဒီနေ့ဆုံဖြစ်ကြရင် မထိခလုတ် ထိခလုတ်ပြော တာတွေကို ကြားရအုံးမယ် ၊၊ သနားစရာသတ္တ၀ါတစ်ကောင်လို ၀ိုင်းကြည့်တာကို ခံရအုံးမယ်၊၊ အင်းကိုယ်ထင် တာလဲဖြစ်မှာပါလေ ၊၊ သူတို့က သာမာန်ကြည့်တာနေမှာပါ ၊၊ အင်းဟိုတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတချို့နဲ့ ပြန်ဆုံဖြစ် တော့ ၊၊ နည်းနည်းပိန်သွားတာကလွဲရင် မင်းက ဒီအတိုင်းပဲနော် ၊၊ ဘာမှ မပြောင်းလဲဘူးတဲ့ ၊၊ ပြောတဲ့သူတွေက တကယ်လို လူကြီးတွေ ဖြစ်လို့ပါလား ၊၊ ဗိုက်ကြီးတွေ ထွက်လို့ လူကြီးကြီးတွေ ဖြစ်နေပါရော့လား ၊၊ အင်း သူတို့ သူငယ်ချင်းကျွန်တော်ကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ ၊၊ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး ၊၊ ဟိုးတုန်းကလို အထိးကျန် တစ်ယောက်တည်းဘ၀ ကို ဖြတ်သန်းနေဆဲ ပါပဲလေ ၊၊ ဘ၀က တစ်ယောက် တည်း အထိးကျန် နေဖို့ ၊ ဖြတ်သန်း ဖို့များ ပြဌာန်းခဲ့လေသလားကွယ် ................